Kumqondisi weJeduthuni. Elika-Asafa.+ Ihubo. 77 Ngezwi lami ngizokhala nokukhala kuNkulunkulu uqobo,+Ngezwi lami kuNkulunkulu, futhi ngokuqinisekile uzongilalela.+ 2 Ngimfunile uJehova ngosuku lokucindezeleka kwami.+Ebusuku isandla sami seluliwe futhi asibi ndikindiki;Umphefumulo wami wenqabile ukududuzwa.+ 3 Ngizokhumbula uNkulunkulu ngihlokome;+Ngizobonisa ukukhathazeka, umoya wami uze ufikelwe isinxi.+ Sela. 4 Ubambé amajwabu amehlo ami;+Ngiyaluzile, futhi angikwazi ukukhuluma.+ 5 Ngicabangé ngezinsuku zakudala,+Ngeminyaka yesikhathi esidlule esingaziwa. 6 Ngizokhumbula umculo wami wezintambo ebusuku;+Ngizobonisa ukukhathazeka ngenhliziyo yami,+Umphefumulo wami uzohlola ngokucophelela. 7 Ingabe uJehova uyoqhubeka elahla njalo njalo,+Futhi akasayikuphinde ajatshuliswe?+ 8 Ingabe umusa wakhe wothando ukhawuke phakade?+Ingabe izwi lakhe libe yize+ isizukulwane ngesizukulwane? 9 Ingabe uNkulunkulu usekhohliwe ukuba nomusa,+Noma ingabe uvale isihe sakhe ngentukuthelo?+ Sela. 10 Ingabe ngizoqhubeka ngithi: “Yilokhu okungihlabayo,+Ukushintsha kwesandla sokunene soPhezukonke”?+ 11 Ngizozikhumbula izenzo zikaJah;+Ngoba ngizokukhumbula ukwenza kwakho okumangalisayo kwakudala.+ 12 Ngokuqinisekile ngizozindla ngawo wonke umsebenzi wakho,+Futhi ngizozikhathaza ngezenzo zakho.+ 13 O Nkulunkulu, indlela yakho isendaweni engcwele.+Ubani onguNkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu?+ 14 Wena unguNkulunkulu weqiniso, owenza ngokumangalisayo.+Wenzé ukuba amandla akho aziwe phakathi kwezizwe.+ 15 Wophulé abantu bakho ngengalo yakho,+Amadodana kaJakobe nakaJosefa. Sela. 16 O Nkulunkulu, amanzi akubonile,Amanzi akubonile; aqala ukuba sebuhlungwini obukhulu.+Futhi, izintwa zamanzi zaqala ukuyaluza.+ 17 Amafu athululé amanzi ngokuduma;+Isibhakabhaka esinamafu sizwakalise umsindo.Futhi, imicibisholo yakho yaya laphaya nalaphaya.+ 18 Umsindo wokuduma kwakho wawunjengamasondo enqola;+Imibani ikhanyisé izwe elikhiqizayo;+Umhlaba wayaluza waqala ukuzamazama.+ 19 Indlela yakho yayinqamula olwandle,+Nomendo wakho wawunqamula emanzini amaningi;Futhi izinyathelo zakho azizange zaziwe. 20 Ubaholile abantu bakho njengomhlambi,+Ngesandla sikaMose no-Aroni.+